बाजुरामा जैतुन खेतीको विस्तार – Aarthik Dainik
विचार Posted on १४ असार २०७७, आईतवार १४:१०
जैतुनको लागि नेपालको एकमात्र क्षेत्र हो बाजुरा । नेपालको बाजुरा जिल्लामा पाइने जंगली जातको जैतुनलाई स्थानीय भाषामा ‘लौठो’ भनिन्छ । यो लौठो परापूर्वकालदेखि समुद्री सतहबाट १००० मिटरदेखि २५०० मिटरको उचाइसम्मका जङ्गलमा प्राकृतिक रुपमा फैलिँदै हुर्किँदै आएको छ ।
बाजुरा जिल्लामा २०,००० हेक्टरभन्दा बढी स्थानीय जातले ढाकेको अनुमान छ । स्थानीय जातका जैतुन पाइने बाजुरामा युरोपियन जैतुन ९इभिब भगचयउबभब० हुनसक्ने सम्भावना देखेर नेपाल सरकारको अनुरोध र इटली सरकारको आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोगमा नेपाल स्थित एफ.ए.ओ ९ँ।ब्।इ० को संयुक्त प्रयासमा सन् २००६ मा बाजुरा जिल्लाको कोल्टी (१४०० मि. उचाइ)मा इटलीबाट २८ जातका जैतुन ल्याई जैतुनको परीक्षण बगैंचा ९उष्यित यष्खिभ यचअजबचम० स्थापना भयो ।
अहिले परीक्षण बगैंचामा उन्नत जातका जैतुन फलिरहेका छन् र तीमध्ये बढी फल्ने जातका जैतुन बिरुवा तयार गरी किसानको बारीमा लगाउने काम सुरु गरिएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना (आ.व. २०७३/०७४) ले बाजुरालाई जैतुन जोन छनौट गरेको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले जिल्लालाई जैतुनको सुपरजोन निर्माणका लागि कार्यक्रम अघि बढाएको छ ।
साबिकका वाई, जुकोट, जगन्नाथ र बाधु गाविसमा सञ्चालन भइरहेको कार्यक्रममा वि.सं. २०७५ सालमा १५ वटा नयाँ बगैँचा तथा पकेट क्षेत्र थप गरिएको थियो । सुपरजोन निर्माण हुँदा जिल्लामा जैतुनको बृहत् व्यावसायिक उत्पादन तथा औद्योगिक क्षेत्रका रुपमा विस्तार हुने हुँदा स्थानीय तह र स्थानीयवासीले समेत जैतुन खेतीलाई विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
क) स्वास्थ्यसम्बन्धी महत्व : जैतन तेल एवं फलको नियमित सेवनले –
१) जैतुनको तेल प्राकृतिक रस हो जुन स्वाद, सुगन्ध एवं भिटामिनको लागि पनि प्रयोग गरिन्छ ।
२) मुटु रोगदेखी अर्बुद ९ऋबलअभच० रोगीसम्मलाई उपयोग गर्न सकिने यो तेलको प्रयोग युरोपेली मुलुकमा बढी प्रयोग हुन्छ ।
३) यौन क्षमता बढाउँछ साथै दिमाग तेज बनाउँछ ।
४) उच्च रक्तचाप र मधुमेह रोगलाइ नियन्त्रण एवं नियमित गर्छ तथा ष्फगलभ कथकतझ बढाउँछ।
५) बिर्सने ९म्ष्भलकष्ब०, अल्जाइमर रोग र रगत जम्ने ९द्ययियम अयिततष्लन० रोग नियन्त्रण गर्छ ।
६) बूढो हुने गति ९ब्नष्लन० कम गराउँछ ।
७) खाना पचाउन मद्दत गर्छ ।
८) पत्थरी लाग्न नदिन मद्दत गर्छ साथै मस्तिष्कको विकासमा सहयोग पु¥याउँछ ।
९) अनुहारको पोतो हटाउने, अनुहार चाउरी पर्न नदिने साथै छाला र कपालका रौंहरु स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ ।
१०) कोषिका वृद्धि गर्न र घाउ छिटो पुरिन मद्दत गर्छ ।
११) काखीको दुर्गन्ध हटाउन र रोगका किटाणु नष्ट गर्न मद्दत गर्छ ।
१२) जैतुनको तेलमा बढी मात्रामा यलय गलकबतगचबतभम बततथ बअष्म डण्५ पाइन्छ, यसको सेवनबाट अजयभिकतभचय बढ्दैन ।
ख) आर्थिक महत्व : धान, गहुँ, मकै, कोदोभन्दा पाँच गुणा बढी आम्दानी यो बालीबाट लिन सकिन्छ । जैतुनको काँटछाँट गरेको हाँगाबिँगा राम्रो बल्ने दाउरा हुन्छन् र पातहरु भेडाबाख्राले खान्छन् साथै पिनाबाट आगो बाल्ने गुइँठा बन्छ । पिना मलको रुपमा पनि प्रयोग हुन्छ । जैतुनको काठ चिल्लो र बलियो हुने भएकाले झ्याल, ढोका बनाउन पनि सकिन्छ । जैतुनको काठबाट बनेका हस्तकला बढी मूल्यमा बिक्री हुन्छन् । साथै जैतुनको फल टिप्न बढी श्रमिक चाहिने भएकाले प्रशस्त रोजगारीको अवसर प्राप्त हुन्छ ।
ग) औद्योगिक महत्व : जैतुनको तेलबाट बढी मूल्यवान् सेन्ट, साबुन, क्रिम र अन्य कस्मेटिक सामानहरु बनाइन्छ । आयुर्वेदिक औषधि उत्पादनमा प्रचुर मात्रामा यसको प्रयोग गरिन्छ। यसको कमसल तेल बत्ती बाल्न र मेसिनरी औजारमा प्रयोग गरिन्छ । जैतुनको तेल पेल्न, अचार बनाउन, खेती गर्न र फल टिप्न, ढुवानी गर्न आदि कार्यको लागि आवश्यक पर्ने मेसिन एवं औजारहरु निर्माण गर्न कल–कारखानाहरु स्थापना भएका हुन्छन् ।
घ) धार्मिक एवं सामाजिक महत्व : धेरै पहिलेदेखि पवित्र मानिने जैतुनको तेल अहिले पनि धार्मिक चाडबाड एवं समारोहमा प्रयोग गरिन्छ। जैतुन तेल खान र शरीरमा घस्न मात्र नभई मन्दिर, चर्च, मस्जिदमा बाल्ने र देवतालाई चढाउने गरिन्छ साथै क्रिसमसमा विशेष महत्व हुन्छ । प्राचीनकालमा देवीदेवतालाई चढाउन र ठूलाबडाको स्वागत गर्न जैतुन मुनाको गुच्छा दिने गरिन्थ्यो भन्ने विश्वास रहेको छ । जैतुनको तेल र पातसहितको हाँगा मृत शरीर र चिहानमा राख्ने गरेको पाइन्छ ।
तर, दुःखको कुरा जिल्लाका अधिकांश सामुदायिक वनमा स्थानीय जातको जंगली जैतुन प्रशस्त भए पनि संकलन र प्रशोधन केन्द्र नहुँदा खेर जानथालेको छ । जिल्लाका प्रत्येक सामुदायिक वनमा भएका जंगली जैतुनलाई संकलन गर्ने तरिका र प्रशोधन गर्ने मेसिन नहुँदा जैतुन खेर जाने गरेको छ । जंगलमा पाइने स्थानीय जातको जैतुन वर्षभरिमा करिब ५० करोडको जैतुन तेल बेच्न सकिने जैतुन कार्यान्वयन एकाइ जोन कार्यालय बाजुराको भनाइ छ ।
बाजुरेली कृषक लागि एःब्ःए ले जैतुनतिर आकर्षित गर्न सके युरोपियन देशमा जैतुनको तेल ९इष्खिभ इष्०ि को माग बढ्दो छ र जैतुन प्रशोधित गरेर निर्यात गर्न सक्यौँ भने नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि ठूलो टेवा पुग्नेछ । जैतुनसम्बन्धी जानकारी र पर्याप्त ट्रेनिङ दिएर प्रस्रोधनको ग्यारेण्टी सरकारले जिम्मा लगिदियोस् भन्ने चाहन्छु । त्यसैले सम्बन्धित सरोकारवाला र जनप्रतिनिधिको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
९ चैत्र २०७६, आईतवार १२:३७
२४ माघ २०७६, शुक्रबार १३:१०
स्वघोषित स्वामी महाराजजीहरू र नेपाली समाज